मन्त्रिपरिषद् विस्तार : कुन दलबाट कोको बन्दै छन् मन्त्री ? - DURBAR TIMES
HomePoliticsमन्त्रिपरिषद् विस्तार : कुन दलबाट कोको बन्दै छन् मन्त्री ?
मन्त्रिपरिषद् विस्तार : कुन दलबाट कोको बन्दै छन् मन्त्री ?
‘प्रधानमन्त्रीज्यू जतिसक्दो छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रयासरत हुनुहुन्छ, सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलसँग उहाँले मन्त्रीको लिस्ट माग्नुभएको छ, बिहीबारसम्म मन्त्रालय कसले कुन लिने टुंग्याएर सम्भवतः शुक्रबार सरकारले पूर्णता पाउँछ,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले राजधानीसँग भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भएपछि जसपाबाट सरकारको नेतृत्व श्रेष्ठले गर्ने भएका हुन् । यस्तै, जसपाबाट महेन्द्र राय यादव, प्रदीप यादव, मृगेन्द्र सिंह, प्रमोद साह र रेणु यादव मन्त्री हुने करिब निश्चितजस्तै छ ।
Previous articleएमसीसी पास गर्नुपर्छ : डा. बाबुराम भट्टराई
Next articleआजदेखि काठमाडौंमा सभाजुलुस, जात्रा, महोत्सव गर्न नपाइने (अन्य आदेशसहित)